Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ugbu a Seychelles apụla na Ndepụta Red UK
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Seychelles wepụrụ aha UK Red List
Seychelles apụtala na ndepụta uhie UK nke na -aka akara nzọụkwụ ọzọ na mgbake njem na -aga.
Officelọ ọrụ mba ofesi, Commonwealth & Development etoola ndụmọdụ ya megide njem niile dị mkpa mana ọ na -aga ebe 47 gụnyere Seychelles.
Ndị njem ga -enwe ike nweta mkpuchi maka ebe ha na -aga, a chọghịzi ka ndị ịgba ọgwụ mgbochi nwalee ule PCR ma ọ bụ ịpụ iche.
Nke a ga -enye nkwalite ebe ọ na -aga yana ndị na -anya ụgbọelu ya na ndị mmekọ ụlọ ọrụ njem ya.
Site n'elekere anọ nke ụtụtụ GMT, Mọnde, Ọktọba 4, 11, ndị njem si UK, ahịa ahịa isi azụ ahịa nke atọ nke Seychelles, nwere ike gaa ọzọ na -aga njem n'agwaetiti Indian Ocean na ndị njem nwere ike nweta mkpuchi maka ebe ha na -achọ ọgwụ mgbochi. ime ule PCR ma ọ bụ ịpụ iche na họtel akwadoro mgbe ha laghachiri n'ụlọ.
Officelọ ọrụ mba ofesi, Commonwealth & Development (FCDO) ebulila ndụmọdụ ya megide njem niile dị mkpa na ebe 47 gụnyere Seychelles dị ka akụkụ nke usoro dị mfe maka njem mba ofesi nke hụla ka e jiri dochie anya usoro ọkụ okporo ụzọ dochie anya otu ndepụta na -acha uhie uhie, wee belata ihe nlele maka ndị njem tozuru oke ịgba ọgwụ mgbochi.
Onye minista mba ofesi na njem nlegharị anya nke Seychelles Sylvestre Radegonde anabatala mmemme a nke na -abịa n'ihu ọkara ọkara oge ezumike na oge oyi. “Wepụ na ndepụta uhie UK bụ ihe ọzọ dị mkpa na mgbake nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Seychelles, ọ ga -enyekwa nkwalite ebe ọ na -aga yana ndị na -anya ụgbọ elu ya na ndị mmekọ ụlọ ọrụ njem ya. Obi dị anyị ụtọ ịnabataghachi ndị ọbịa Britain anyị, ezinụlọ na ndị lụrụ nwanyị ọhụrụ n'agwaetiti anyị mara mma. UK abụrụla ahịa siri ike maka Seychelles, ọkwa nke atọ na 2019 yana ndị ọbịa 29,872, anyị nwere nchekwube na site na akụkọ ọma a, anyị ga -amalite ịhụ ha ọzọ n'ọnụ ọgụgụ. Site na usoro ahụike na nchekwa nke ndị na-ahụ maka njem na ụlọ ọrụ nabatara asambodo nchekwa COVID-19, a na-ekwe ndị ọbịa anyị nkwa ezumike dị mma na nke na-atọ ụtọ. ”
Ndị ọbịa na Seychelles kwesịrị dejupụta akwụkwọ ikike njem ebe a ma gosi ihe akaebe nke ule PCR na -adịghị mma awa 72 tupu ịga ebe ị na -aga.
Seychelles bụ otu n'ime ebe izizi mepere ndị ọbịa n'agbanyeghị ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi na Machị gara aga na -eso mmemme ịgba ọgwụ mgbochi siri ike nke mere ka ọtụtụ ndị bi na ya gbaa ọgwụ mgbochi. Ọ malitela ugbu a inye ndị okenye yana ịgba ọgwụ mgbochi ọgwụ PfizerBioNTech. Ọnụ ọgụgụ COVID-19 agbadala nke ukwuu n'izu ndị na-adịbeghị anya ebe ikpe ole na ole na-eme n'etiti ndị njem.